वि. सं. २०७८ जेठ २४ गते, सोमवारको राशिफल - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ जेठ २४ गते, सोमवारको राशिफल
इनेप्लिज २०७८ जेठ २४ गते १:३२ मा प्रकाशित
आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न पुनः सुरु गर्नको लागि सर्वश्रेष्ठ दिन। तपाईंले आफ्नो अतिरिक्त पैसा आउने समयमा लाभ हुने सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। भावनात्मक जोखिम तपाईंको पक्षमा हुनेछ। तपाईं रोमान्टिक विचार र विगतका सपनाहरूमा हराउनु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो कार्यमा ध्यान दिनुभयो भने – आफ्नो उत्पादन दोब्बर गर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईं एउटा तारा झै व्यवहार गर्नुहोस् – तर केवल प्रशंसनीय कुरा गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
ध्यानले राहत ल्याउनेछ। तपाईंले प्रियजनहरूसँग तर्क हुन सक्ने विवादास्पद मुद्दाहरू ननिकाल्नुहोस्। सेक्सको इच्छित परिणाम पाउनु हुनेछ। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। आफ्नो उपस्थिति बढाउन र सम्भावित साथीलाई आकर्षित गर्न सक्ने परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईंको जोडी साँच्चै नै तपाईंको लागि स्वर्गदूत हो, र तपाईंलाई यस कुराको आज थाहा हुनेछ।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। तपाईंले उनीलाई पर्याप्त ध्यान दिनुभएन भने प्रेमी दुखी हुनेछन्। बाँकी रहेका परियोजना र योजनाहरू अन्तिम आकार लिन उत्प्रेरित हुनेछन्। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। दिनमा आफ्नो जोडीसित तपाईंको तर्क हुन सक्छ, तर यो आज राती खानाको समयमा समाधान हुनेछ।
तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। बच्चाहरुलाई अध्ययनमा राम्ररी चासो नराख्नाले स्कूलमा केही निराशा उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईंका वरिष्ठहरू आज तपाईंको कामको गुणस्तरले प्रभावित हुन सक्छन्। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर आफैंलाई बेवास्ता नगर्नको लागि होसियार हुनुहोस्। धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। पुराना आफन्तहरूले अव्यावहारिक मागहरू गर्ने सम्भावना छ। आफ्नो प्रियको। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार / कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। तपाईंको यो एउटा रमाइलो रोमान्टिक दिन हुन सक्छ, तर केही स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्।
साथीहरूसँग साँझ रमाइलो हुन सक्छ तर धेरै खानाले भोलीपल्ट बिहान विरक्तलाग्दो हुन सक्छ भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। आज तपाईंको समर्पण र मेहनतले पहिचान पाउनेछ र तपाईंको लागि केहि आर्थिक इनाम ल्याउनेछ। आफ्नो परिवारको हितको लागि कठिन काम गर्नुहोस्। तपाईंको कार्य प्रेम र सकारात्मक दृष्टिद्वारा गरिएको हुनुपर्छ, तर लोभद्वारा होइन। तपाईंका आँसु कुनै विशेष मित्रले पुछिदिन सक्छ। कामको समयमा तपाईंका कामको प्रशंसा गरिनेछ। तपाईंको सञ्चार प्रविधी र काम कौशल प्रभावशाली हुनेछ। यो दिन तपाईंको नियमित वैवाहिक जीवनमा विशेष दिन हो; तपाईंले आज साँच्चै असामान्य केही अनुभव गर्नु हुनेछ।
जीवन रमाइलो पार्न आफ्नो आकांक्षाहरूको जाँच गर्नुहोस्। योगको मदत लिनुहोस् – जसले तपाईंलाई आफ्नो स्वभाव सुधार गर्न शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तवरमा स्वस्थ भएर बाँच्ने कला सिकाउँछ। आफ्नो जोडीसित घरेलू काम सक्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। प्रेम मामिलामा सशक्त नहुनुहोस्। अरूले तपाईंको धेरै समय माग गर्न सक्छन् – तिनीहरूलाई तपाईंले कुनै प्रतिबद्धता दिनुभन्दा अघि आफ्नो काम प्रभावित हुँदैन र तिनीहरूले तपाईंको दया र उदारताको फाइदा उठाउन खोज्दै छैनन् भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो जोडीले दिएको तनाउले गर्दा तपाईंको स्वास्थ्य नराम्रो हुन सक्छ।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। तपाईं प्रेमको मूडमा हुनुहुनेछ – र अवसर पनि प्रशस्त हुनेछन्। तपाईंका प्रयासहरूका लागि मान्छेले काममा तपाईंलाई पहिचान गर्नेछन्। तपाईंले आज आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ। बाँकी रहेको घरेलू कामले तपाईंको केही समय लिनेछ। भोलि धेरै देरी हुन सक्छ यसैले तपाईंले आफ्नी प्रियतमालाई आफ्नो सन्देश व्यक्त गर्नुपर्छ। लघु अवधिका कार्यक्रममा आफुलाई संलग्न गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई नवीनतम प्रविधिहरू र कौशल सिक्न मद्दत गर्नेछ। समयका अभावको कारण तपाईं र तपाईंको प्रेमी बीच निराशा बढ्न सक्छ।
ध्यान र योग आध्यात्मिक साथै भौतिक लाभको लागि लाभदायी साबित हुनेछन्। आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको भावनामा चोट लाग्नुबाट जोगिन आफ्नो स्वभावमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। तपाईंको कडा परिश्रमले आज काममा रंग देखाउनेछ। प्रेम र राम्रो खाना वैवाहिक जीवनका मूल कुराहरू हुन्; र तपाईंले आज यी सबैको राम्रो अनुभव गर्न जानु हुँदैछ।
तपाईंसँग आज आफ्नो लागि पर्याप्त समय हुनेछ। त्यसैले; आफ्नो राम्रो स्वास्थ्यको लागि लामो पैदल यात्राका लागि बाहिर जानुहोस्। तपाईंका प्रियजनहरूसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिने मुद्दालाई बढ्न नदिन सक्ने सबै भन्दा सही मान्छे तपाईं हुनुहुन्छ। आफ्नो प्रेमीको भावनात्मक माग पूरा गर्न हरेस नखानुहोस्। आफ्नो बौद्धिक शक्तिको प्रयोग आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुहोस्। यसले व्यावसायिक परियोजनाहरू पूरा गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ र नयाँ विचार दिनेछ। आज तपाईंले गरेको स्वयंसेवक कार्यले तपाईंले सहयोग गर्नहरूलाई मात्र नभएर तर तपाईंले थप आफैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मद्दत गर्नेछ। तपाईंलाई दिन राम्ररी बितोस् भन्ने लाग्छ भने, आफ्नो जोडीको मूड नराम्रो भएको बेला एक शब्द पनि नबोल्नुहोस्।